Alshabaab oo soo bandhigtay Meydadka Ciidamo Dowladda Federaalka ah ka tirsanaa. – Shabakadda Amiirnuur
February 14, 2021 3:42 pm by admin Views: 327
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Deegaanka Daarusalaam ee Gobalka Shabeelaha hoose ku soo bandhigtay Meydadka Ciidamo ka tirsanaa Dowladd Federaalka oo ay ku dishay Dagaal shalay galab halkaa ka dhacay.
Ciidamada Dowladda Federaalka ah ee ku sugan Demgada Awdheegle ayaa soo weeraray Deegaanka Daaru salaam oo aan sidaa uga fogeyn kana mid ah Dhulka Shareecada Islaamka lagu xukumo, hase ahaatee Ciidamada Xarakada Shababul Mujaahdiin oo awalba heegan ku jiray ayaa ka hor tegay.
dagaal muddo socday kadib Ciidamada Federaalka ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa cagaha wax ka dayay waxayna ka carareen Meydadka Askar dagaalka looga dilay iyo qoryahoodi.
inkastoo Meydadku laba askeri ahaayeen hadana waxaa la aamisan yahay in Khasaaruhu intaa ka badan yahay oo ay jiraan askar la dilay ama la dhaawacay oo ay qaateen hase ahaatee kuwaan la soo bandhigay waa kuwii nafu u diiday in ay qaataan ee iyagoo u jeeda ay ka carareen.